Nnwom 137 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Babilon nsubɔnten ho
Wɔanto Sion dwom biara (3, 4)
Wɔbɛsɛe Babilon (8)
137 Babilon nsubɔnten ho+ na yɛtenatenae. Bere a yɛkaee Sion no, yesui.+ 2 Ɛhɔ* nsuano nnua so naYɛde yɛn asanku sensɛnee.+ 3 Ɛhɔ na wɔn a wotuu yɛn ase fii yɛn man mu no kae sɛ yɛnto dwom mma wɔn;+Ná wɔn a wɔredi yɛn ho fɛw no pɛ sɛ wɔde yɛn gyigye wɔn ani. Wɔkae sɛ: “Monto Sion nnwom no baako mma yɛn.” 4 Yɛbɛyɛ dɛn ato Yehowa dwomWɔ ananafo asaase so? 5 O Yerusalem, sɛ me werɛ fi wo a,Ma me nsa nifa nnwudwo.*+ 6 Sɛ mankae wo,Na mamma Yerusalem ho asɛm anhia meAnsen biribiara a ɛma midi ahurusi+ a,Ma me tɛkrɛma mfam me dodom. 7 O Yehowa, kae nea Edomfo kae,Ɛda a Yerusalem sɛee no. Wɔkae sɛ: “Munnwiriw ngu! Munnwiriw ngu nkosi ne fapem so!”+ 8 O Babilon babea a ɛrenkyɛ na wɔasɛe wo,+Anigye ne onipa a ɔde nea wode yɛɛ yɛn no ara biBetua wo ka.+ 9 Anigye ne onipa a ɔbɛkyere wo mmaNa ɔde wɔn ahwehwe abotan so.+
^ Ɛkyerɛ Babilon.
^ Ebetumi nso akyerɛ, “nwu.”